Xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo la shaaciyay iyo haweenka oo door ka helay – Kalfadhi
Guddiga xullida golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa galabta shaaciyay 31 xubnood oo ah golaha cusub ee deegaanka. Xubnahan ayaa buuxiyay shuruudaha habraacii guddiga soo xulidda.
Golahan oo ka yimi qaybaha bulshada ayaa muda xileedkoodu noqonayaa shan sano, sida uu dhigayo xeerka dowladaha hoose ee Puntland (Xeer Lr.7), waxayna dhowaan dooran doonaan gudoomiyaha iyo ku xigeenka cusub ee magaaladda.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad ayaa sheegay in guddigu qabteen ilaa 90 arji oo lagu codsaday ka mid noqoshada xubnaha golaha deegaanka.
Haweenka ayaa saami wanaagsan ka helay waxaana ku jira golaha deegaanka cusub lix gabdhood. Golihii kan ka horeeyay ee la kala diray bishii nofembar ayaa dumarku ku lahaa afar xubnood oo keliya. Habraaca hore loo dejiyay ayaa ku amrayay nabadoonada in beelaha leh laba xubnood iyo wax ka badan in ay golaha metelaya ku soo daraan gabdho.
Xubnaha cusub ee golaha deegaanka Gaalkacyo oo isla galabta la dhaariyay
Doorashada guddoonka ayaa la filayaa in ay dhici doonto toddobaadkan, in kastoo aan weli la muddayn.
Guddi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ayaa madaxweynuhu u magcaabay in ay golaha deegaanka dhisaan. Ilaa saggaal degmo ayaa qorshuhu yahay in loo sameeyo golayaasha deegaanka.